के म डेटिङ गर्न सक्ने भइसकें? | युवाहरू सोध्छन्‌ सीधै सामग्रीमा जाने
डेटिङ गर्नुको उद्देश्य के हो?
तपाईं विपरीत लिङ्‌गको एक जना व्यक्तिसित सधैंजसो घुम्न जानुहुन्छ। के त्यसको मतलब तपाईंहरू डेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाईंलाई विपरीत लिङ्‌गको एक जना व्यक्ति मन पर्छ र उसलाई पनि तपाईं राम्रो लाग्छ। तपाईंहरू दिनमा धेरै पटक मेसेज वा फोन गर्नुहुन्छ? के त्यसको मतलब तपाईंहरू डेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ?
पहिलो प्रश्नको जवाफ दिन तपाईंलाई गाह्रो छैन होला। तर दोस्रो र तेस्रो प्रश्नको जवाफ दिन भने तपाईंलाई गाह्रो लागेको हुन सक्छ। त्यसोभए डेटिङ भनेको वास्तवमा के हो त?
त्यसैले माथिको तीनवटै प्रश्नको जवाफ हो: ‘तपाईंले डेटिङ गरिरहनुभएको छ।’ फोनद्वारा होस् या भेटेर, सार्वजनिक ठाउँमा होस् या एकान्त ठाउँमा यदि तपाईंले विपरीत लिङ्‌गको कुनै व्यक्तिसित रोमान्टिक सम्बन्ध गाँसिरहनुभएको छ र नियमित रूपमा ऊसित कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईंले डेटिङ गरिरहनुभएको छ।
तर तपाईंका साथीहरूले डेटिङलाई हल्का रूपमा लिन्छन्‌ होला। विवाह गर्ने कुनै उद्देश्य नभए पनि रमाइलोको लागि मात्र तिनीहरू विपरीत लिङ्‌गको व्यक्तिसित समय बिताउँछन्‌ होला। अथवा अरूको अगाडि सान देखाउनको लागि पनि गर्लफ्रेन्ड वा ब्वाइफ्रेन्ड बनाउँछन्‌ होला।
स्पष्ट छ, तपाईं कुनै व्यक्तिसित डेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिको मनमा पनि तपाईंको लागि भावनाहरू पैदा हुन्छ। त्यसैले तपाईंको मनसाय सफा हुनै पर्छ।​—⁠लूका ६:⁠३१.
विवाह गर्ने उद्देश्य विना नै डेटिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईं नयाँ खेलौना पाएपछि रमाउँदै खेल्ने अनि एकै छिनमा फ्याँक्ने बच्चा जस्तै भइरहनुभएको हुनेछ
एकछिन सोच्नुहोस्: कसैले तपाईंको भावनासित खेलबाड गरेको के तपाईंलाई मन पर्छ? तपाईंको भावनालाई खेलौना सम्झेर केही बेर खेलेको अनि एकछिन पछि फ्याँकिदिएको के तपाईं सहन सक्नुहुन्छ? त्यसो भए अरूलाई पनि त्यसो नगर्नुहोस्। बाइबल भन्छ: ‘प्रेमले अभद्र व्यवहार गर्दैन।’​—⁠१ कोरिन्थी १३:​४, ५.
चेल्सी नामकी युवती भन्छिन्‌: “कहिलेकाहीं मलाई डेटिङ भनेको रमाइलोको लागि मात्र गरे पनि भइहाल्छ नि जस्तो लाग्छ। तर अर्को व्यक्तिले सम्बन्धलाई गम्भीरतासाथ लिएको छ भने यसलाई खेलाँची गर्न मिल्दैन।”
सुझाव: डेटिङ अनि विवाहको लागि तयारी गर्न २ पत्रुस १:​५-७ पढ्‌नुहोस् अनि तपाईंले उन्नति गर्नुपर्ने एउटा गुण रोज्नुहोस्। एक महिनाभित्र तपाईंले त्यो गुणबारे कति सिक्नुभयो अनि त्यो गुण कतिको देखाउनुभयो, जाँच्नुहोस्।
अब यही प्रश्न आमाबुबालाई सोध्नुहोस्।
तपाईं र तपाईंको आमाबुबाको जवाफ फरक हुन सक्छ अथवा कहिलेकाहीं मिल्न पनि सक्छ। यदि तपाईं आफैलाई पहिला राम्ररी चिनेपछि मात्र डेटिङ गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ भने तपाईंले सही कदम चालिरहनुभएको हुनेछ।
सत्र वर्षकी डान्येलले पनि यस्तै कदम चाल्ने निर्णय गरेकी छिन्‌। तिनी भन्छिन्‌: “दुई वर्षअघि म आफ्नो भावी श्रीमान्‌मा जुन-जुन गुण होस् भन्ने चाहन्थें, अहिले त्योभन्दा बिलकुलै फरक सोच्छु। साँच्चै भन्नुपर्दा मैले अहिले गरेको निर्णय पनि पछि गएर परिवर्तन नहोला भन्न सक्दिनँ। त्यसैले आफ्नो जीवनसाथीमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा पक्का भएपछि मात्र म डेटिङ गर्नेबारे सोच्छु।”
केही समय कुर्नु बुद्धिमानी हो भन्ने अर्को कारण पनि छ। बाइबलमा “बैंस”-लाई यौन उत्तेजना अनि रोमान्टिक भावना एकदमै बलियो हुने समय हो भनेर बताइएको छ। (१ कोरिन्थी ७:३६) यस्तो बेला विपरीत लिङ्‌गको कुनै व्यक्तिसित ज्यादै नजिकिनु भयो भने आफूलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन सक्छ अनि तपाईंबाट गलत काम हुन पुग्छ।
तपाईंका साथीहरूलाई यस्ता कुराहरूको कुनै चासो छैन होला। तिनीहरूमध्ये धेरै जना यौन सम्बन्ध राख्न आतुर छन्‌ होला। तर तिनीहरूले जे गर्छन्‌, तपाईंले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन अनि गर्नु पनि हुँदैन। (रोमी १२:⁠२) किनभने बाइबलले हामीलाई “अवैध यौनसम्बन्धदेखि भाग” भनेर आग्रह गरेको छ। (१ कोरिन्थी ६:१८) बैंस पार नहोउन्जेल कुर्नु भयो भने तपाईंले ‘दुःखलाई फालिरहनुभएको हुनेछ।’​—⁠उपदेशक ११:​१०, NRV
आफू तयार नभइकनै डेटिङ गर्ने दबाब आउनु भनेको तपाईं भर्खरै नयाँ क्लासमा जानुभयो अनि केही नपढिकनै फाइनल जाँच दिने दबाब पाउनुभएको जस्तै हो। यसो गर्नु तपाईंमाथि सरासर अन्याय हुनेछ। जाँचमा आउने प्रश्नहरूको तयारी गर्न तपाईंलाई समय चाहिन्छ।
डेटिङ भनेको गम्भीर कुरा हो। त्यसैले कुनै व्यक्तिसित विशेष सम्बन्ध राख्नुअघि तपाईंले एउटा महत्त्वपूर्ण “विषय”-मा ध्यान दिनै पर्छ। त्यो हो, साथी बनाउन सिक्ने।
यस कुरामा विचार पुऱ्याउनु भयो भने पछि तपाईंले आफ्नो मन मिल्ने व्यक्ति भेट्‌नुभयो भने उनीसित बलियो सम्बन्ध गाँस्न सक्नुहुनेछ। किनभने विवाह भनेको यस्तो दुई व्यक्तिको मिलन हो, जो एक-अर्काको घनिष्ठ साथी हुन्‌।
हुन त तपाईंलाई अहिल्यै डेटिङ गरौं जस्तो लाग्ला तर हतार नगर्दा राम्रो हुन्छ। किनभने यसो गर्दा तपाईंले आफ्नो युवावस्थामा अझ धेरै स्वतन्त्रताको आनन्द उठाउन सक्नुहुनेछ। (उपदेशक ११:⁠९) तपाईंसित आफ्नो व्यक्तित्वलाई अझ राम्रो बनाउने अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आध्यात्मिक तवरमा उन्नति गर्ने प्रशस्त समय हुनेछ।​—⁠विलाप ३:२७.
त्यतिन्जेल तपाईं विपरीत लिङ्‌गको व्यक्तिसितको सङ्‌गतमा रमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए यसरी सङ्‌गत गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका के हो? सबै जना सँगै भएको बेला समूहमा समय बिताउने। ट्‌यामी नाम गरेकी युवती यसो भन्छिन्‌: “धेरै जना साथी हुनु झनै राम्रो हो, यसरी समूहमा हुँदा निकै रमाइलो हुन्छ।” मोनिका पनि यो कुरामा सहमत छिन्‌। उनी भन्छिन्‌: “समूहमा भेटघाट गर्ने तरिका एकदमै राम्रो हो। यसो गर्दा तपाईंले विभिन्न व्यक्तित्वका मानिससित सङ्‌गत गरिरहनुभएको हुनेछ।”
तर अर्को तर्फ एक जनासित मात्र सङ्‌गत गर्न हतार गर्नुभयो भने पछि गएर दुःख पाउनुहुनेछ। त्यसैले डेटिङ गर्न हतार नगर्नुहोस्, सही समय पर्खनुहोस्। अहिले तपाईंसित भएको समयलाई असल साथी बनाउने र त्यो मित्रतालाई कायम राख्न चाहिने गुणहरू विकास गर्न खर्च गर्नुहोस्। यसो गर्दा भविष्यमा डेटिङ गर्ने विचार गर्नुभयो भने तपाईंले आफ्नो व्यक्तित्वबारे र कस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो भावी जीवन साथी बनाउनु ठीक छ, त्यो राम्ररी थाह पाउन सक्नुहुनेछ।